ငှက်ပန်းထိမ် - ဝီကီပီးဒီးယား
ငှက်ပန်းထိမ် (Psilopogon haemacephalus) သည် ဖိုးခေါင်ငှက်၊ ကုပ်ကလောင်ငှက်တို့နှင့်အတူ 'ကက်ပီတွန်နီဒေး'မျိုးရင်းတွင် ပါဝင်သည်။ သတ္တဗေဒ(ပါဏဗေဒ‎) အမည်မှာ 'မီဂါလာအီမာ ဟီမာစီဖာလာ အင်ဒီကာ' (Megalaima Haemacephala Indica) ဖြစ်သည်။ အလျား ၆ လက်မခန့်ရှိသည်။ ကိုယ်လုံးကိုယ်ထည် တုတ်ခိုင်သည်။ မေးစေ့နှင့် လည်ပင်းတွင် အဝါရောင်ရှိသည်။ ရင်အုပ်တွင် ပန်းနုရောင်ရှိသည်။ အောက်ပိုင်းမှာ ဝါကြန့်ကြန့်အရောင်တွင် အစိမ်းရောင်ကျားနေသည်။
ဤငှက်သည် ကွင်းပြင်များတွင်သာမက မြို့ကြီးများသို့လည်း လာရောက်ကျက်စားတတ်သည်။ သစ်ပင်ထူထပ်သော နေရာနှင့် ကျွန်းတောများတွင်လည်း တွေ့ရတတ်သည်။ အစာမျိုးစုံစားသည်။ အော်သံမှာ တုံတုံဟုမြည်၍ တူထုသံနှင့် တူသဖြင့် ငှက်ပန်းတိမ်ဟု ခေါ်ကြသည်။ အသံမှာ ကျယ်၍ သာယာသည်။ ပူအိုက်သော ရာသီတွင် ထိုငှက်အော်သံကို အမြဲကြားရ၍ မိုးရာသီတွင်မူ တစ်ခါတစ်ရံသာ ကြားရတတ်သည်။ ညအချိန်တွင် မအော်တတ်ချေ။
ငှက်ပန်းထိမ်သည် ဖေဖော်ဝါရီလမှ မေလအတွင်း သားပေါက်သည်။ တစ်မြုံလျှင် ၃ ဥမှ ၄ ဥအထိရှိတတ်သည်။ ဥများမှာ အဖြူရောင်ရှိသည်။ ငှက်ပန်းထိမ်ကို အရှေ့တိုင်းနိုင်ငံများတွင် အနှံ့အပြား တွေ့ရသည်။ မြန်မာနိုင်ငံတွင် ဤငှက်သည် တောင်ခြေနှင့် ကွင်းပြင်များတွင် ကျက်စားတတ်သည်။ တောင်ပေါ်တွင်ကား နေလေ့ မရှိချေ။ 
Bathing in the rain in Kolkata, West Bengal, India
In nest in Kolkata, West Bengal, India
Feeding Juvenile at nest in Kolkata, West Bengal, India
Adult with Immature in Kolkata, West Bengal, India
digging nesting whole in Hyderabad, India.
in taking off flight in Hyderabad, India.
Coppersmith on Ficus Tree
↑ BirdLife International (2016). "Psilopogon haemacephalus". IUCN Red List of Threatened Species 2016. IUCN.
↑ မြန်မာ့စွယ်စုံကျမ်း၊ အတွဲ(၃)။
"https://my.wikipedia.org/w/index.php?title=ငှက်ပန်းထိမ်&oldid=710031" မှ ရယူရန်
ဤစာမျက်နှာကို ၁၉ အောက်တိုဘာ ၂၀၂၁၊ ၁၇:၁၃ အချိန်တွင် နောက်ဆုံး ပြင်ဆင်ခဲ့သည်။